ဝန်ထမ်းနှင့် နတ်ပြည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ၀န်ထမ်းနှင့် နတ်ပြည်
Posted by manawphyulay on Feb 8, 2011 in Buddhism, Science & Religion | 15 comments
ဒီတော့ ဆွမ်းခံကြွလာတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေက ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးကိုကြည့်ပြီး ပြန်လှည့်သွားကြပါတယ်။ ပထမတော့ အိမ်ရှင်သူဌေးကြီးက စီ့းပွားရေးအလုပ်တွေနဲ့ ရှုတ်နေတဲ့အတွက် သတိမထားမိပါဘူး။ တစ်နေ့ အလုပ်အားတဲ့ရက် သံဃာတော်တွေ ကြွမလာတာ တွေ့တာနဲ့ အိမ်ရှင်ဇနီးကို မေးကြည့်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ဝန်းကျင် နတ်သားတွေကလည်း တံခါးစောင့် နတ်သားလေးလို့ပဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ နတ်သားတစ်ဖြစ်လဲ လူငယ်ကလေးကလည်း သူ့ကို တံခါးစောင့်နတ်သားလေးလို့ ခေါ်ကြတာကို လုံးဝစိတ်မဆိုးပါဘူး။ အဲဒီလိုခေါ်တဲ့အတွက် သူ့ကိုယ်သူ ပိုတောင်ဂုဏ်ယူပါသတဲ့။ သူရဲ့ သာမန်တံခါးစောင့်အလုပ်ကလေးက ဒီဘ၀ရောက်အောင် ပို့ပေးလိုက် လို့ပါတဲ့။ ဒီစာရေးနေဆဲ၊ ဒီစာဖတ်နေဆဲမှာ တံခါးစောင့်နတ်သားလေးကတော့ နတ်သမီးတစ်ဖက်ငါးရာနဲ့ တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ ပျော်ရွှင်ဆဲ ရှိချင်ရှိနေဦးမှာပါပဲ။
ဒီဆောင်ပုဒ်ကလေးကို သူက တစ်နေ့သုံးကြိမ်လောက်ရင်ထဲရောက်နေအောင် နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ပါသတဲ့။ အဲဒီဆောင်ပုဒ်ကလေးနဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ပါသတဲ့။ ဒီတော့ သူအနေနဲ့ ရာထူးလေးတွေ ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ တိုးတိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့စရိတ်နဲ့ပဲ အပြင်သင်တန်းတွေပါ တက်ခွင့်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့ အတူတူ အလုပ်ဝင်ဖက်တစ်ယောက်ကတော့ သူ့အပေါ် အမြဲ သ၀န်တိုနေပါသတဲ့။
ကုသလံ အန၀ဇ္ဇ သုခ ၀ိပါက လက္ခဏံ – ကုသိုလ်ဟာ အပြစ်ကင်းပြီး ကောင်းကျိုးကိုပေးခြင်း လက္ခဏာရှိတယ်။
အကုသလံ သာဝဇ္ဇ ဒုက္ခ ၀ိပါက လက္ခဏံ – အကုသိုလ်ဟာ အပြစ်နှင့်တကွ မကောင်းကျိုးကိုပေးခြင်း လက္ခဏာရှိတယ်။
ကဲ— ဥပမာ ထားပါတော့။ မြန်မာ့အသံက ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ တစ်ခုကို ထုတ်လွှင့်တော့မယ် ဆိုပါစို့။ အသံလွှင့်ဖို့ အတွက် တစ်ယောက်တည်းလွှင့်လို့မရပါဘူး။ အနည်းဆုံး ၀န်ထမ်းနှစ်ဆယ်ကျော်လောက်နဲ့ လုပ်ကြရတော့မှာပါ။ အသံလွှင့်ဖို့ ဆေးပညာဆိုင်ရာစာစုကို ကွန်ပျူတာစာစီမယ်၊ စာစီတဲ့သူကလည်း ” ငါစီလိုက်တဲံစာလေးတွေဖတ်ပြီး ပြည်သူ ပြည်သားတွေ ဆေးပညာဗဟုသုတလေးတွေရပြီး ကိုယ်ဆင်းရဲ ကင်းကြပါစေ၊ စိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေ” ဆိုပြီး မေတ္တာစိတ်ညွှတ်ပြီး စာစီမယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာပါ။
မြန်မာ့အသံ နှစ်(၆၀) ပြည့် မဂ္ဂဇင်း
၂၀၀၆။မတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်က သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူက ” နေ့တိုင်း ကုသိုလ်ဖြစ်စေရမယ်” လို့ အဓိဌာန်ပြီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို အိမ်မှာ ဆွမ်းခံကြွစေပါတယ်။
စိတ်ထားတတ်ဖို့ သတိပေးတဲ့ မနောဖြူလေး .. ဒီ့ထက် ပိုပြီး ×××××××××
ဆရာလေး သီရိသုဓမ္မာ မနောကာရီ ပြောတာလက်ခံပါတယ်။ (စစ်မှုလည်းမထမ်း၊ ယောက်ျားလည်းမယူတော့ဘဲ သီလရှင်ဝတ်မယ်ဆိုလို့ အခုလောက်ဆို ဦးပြည်းစိမ်းနဲ့ သာသနာ့အနွယ်ဝင် မယ်သီလရှင်ဖြစ်နေလောက်ရောပေါ့)။ ရေအေး၊ပူစက်မှာ တင်ထားတဲ့ သောက်ရေသန့်ဗူးကြီးတွေ ရေကုန်သွားရင် ရုံးမှာသတိတရ တမင်တကာ အသစ်မလဲချင်ကြဘူး။ လူတွေက ကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆကြဟန်ရှိပါတယ်။ လူကလည်းများတော့ တနေ့ကို တဗူးအသာလေးကုန်တယ်။ မနက်ပိုင်း ကိုယ်သောက်တဲ့အချိန်မှာ ရေကုန်နေတာတွေ့လို့ ဗူးအသစ်ကိုလဲပြီး ညနေပိုင်းလောက်ဆိုရင် ကုန်သွားပြန်ရော။ ရုံးမှာ အခြားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေ ရှိရယ်သားနဲ့ အမြဲဖြစ်နေတော့ အရင်က စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်မိတယ်။ နောက်ပိုင်း ရေအကျိုးဆယ်ပါးဆိုတာကို စိတ်သွင်းပြီး ကုသိုလ်ရသကွဆိုပြီး ဝမ်းမြောက်စိတ်နဲ့ လုပ်တော့တော်တော် အဆင်ပြေသွားတယ်။ မငြီးမငြူဘဲ လုပ်နေတာတွေ့လို့ထင်တယ် နောက်ပိုင်းတော့ ကိုယ်ကချည်ပဲ ဒိုင်ခံလုပ်မနေရတော့ဘူး။ ဗော်လံတီယာတွေ များလားတယ်။ ဒါကြောင့်မနောစာထဲပါသလို ကိုယ်ကမရှောင်နိုင်ရင် စိတ်ပြောင်းထားနိုင်တာ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းတခုလို ထောက်ခံပါရစေ။
ဟုတ်တယ်ဗျာ ပြေသလိုသာ ကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ကြရင် ပိုပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ စိတ်ထားတတ်ရင် မြတ်တယ်ဆိုတာက မှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့်လို့ လူတိုင်း မုဒိသာမပွားနိုင်ဘူးလေ။ စိတ်ထဲနှလုံးသွင်းစရာ တစ်ခုက မိမိကိုယ်ကိုသာ ကောင်းအောင်နေနိုင်ဖို့က အဓိကဖြစ်နေတော့တာလို့ထင်ပါတယ်။ bigcatပြောသလိုပဲ စာက နှစ်ခါပြန်ထပ်နေတယ်။ ပြင်လိုက်ရင်တော့ မျက်စိရှင်းသွားတာပေါ့..။
ကွန်နက်ရှင်က စာရိုက်တုန်း တက်နေပြီး တင်အချိန် ကျသွားတော့ စာတွေ ထပ်သွားတာ ဖြစ်မယ်။ ကွန်နက်ရှင်ပြန်ကောင်းလာရင် ဖျက်ပေးမယ်နော်။ မနောကာရီက မဆိုးပါဘူး။ မနော သဘောကျတယ်။ သီရိသုဓမ္မာက အတော် ကျင့်မှ ရတဲ့ဘွဲ့မလား… ကျင့်ကြံဖို့ အများကြီးလိုပါသေးတယ် ဦးကြောင်ကြီးရယ်…. မနောကာရီတောင်မဖြစ်သေးဘူး။
သီရီသုဓမ္မ တော့ မသိဘူး သီရိသုဓမ္မ မဏိဇောတဠရ ဆိုရင် သဘောပေါက်မှာပေါ့.. မနောကာရီ အတွက် ကြောင်ကြီးက အတိတ်ကြီး ပေးတာ ယူထား.. မြန်မြန်တွက်ပြီး ၂လုံး ၃လုံး တွက်ထိုးလိုက်နော်။
မနောကာရီဖြစ်ဖို့ကလွယ်ပါတယ်။ မနောရီလို့ရှိရင် လက်ဖဝါးကာပြီးရီပေါ့။
မမမနော ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ……… မမတင်တဲ့ပိုစ့်တွေထဲက ရှောက်ရွက်9ရွက်ပိုစ့်ကို print ထုတ်ပြီး သူငယ်ချင်းကိုပေးလိုက်တာ …. သူငယ်ချင်းက ပိစိကွေးကို ကျေးဇူးတွေအရမ်းတင်နေပါတယ်….. သူနဂိုကတော်တော်ကို ၀ရာကနေ အခု တော်တော်ကိုယ်ရေစစ်သွားပါတယ်…… ဒီလိုပိုစ့်လေးတွေများများတင်ပေးပါနော်…. ပိစိကွေးကတော့ ဒီမှာဖတ်ရတဲ့သတင်းမှန်သမျှ သူငယ်ချင်းတွေကိုပြန် Share ပေးပါတယ်….. မမမနောတစ်ယောက်စာတွေများများရေးနိုင်ပါစေ…. အခုတင်ထားတဲ့ ပိုစ့်ထဲကလိုပဲ ကျင့်ကြံနေထိုင်သွားပါမယ်နော်မမ…
တကယ်တော့ .. ၀န်ထမ်းတွေ မတည့်မှ .. အထက်ကအရာရှိ.. ကအုပ်ချုပ်ရလွယ်ပါသတဲ့..။
ဒီတော့ .. အုပ်ချုပ်မှုပညာရပ်မှာ .. ၀န်ထမ်းတွေ .. အတိုက်အထိလေးတွေ ရှိနေအောင် .. ပညာလေးတွေနည်းနည်းစီပြထားကြတတ်ပါတယ်..။
အဲဒီတော့ ..တသက်လုံးဝန်ထမ်းမလုပ်ချင်သူတွေ .. ဒါလေးနှလုံးသွင်းသားရင်ပိုကောင်းတယ်.။
သဂျီး ပြောတဲ့ စကား ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း အကြီးကြီးတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ အဆင့် မဟုတ်ပေမဲ့.. ၀န်ထမ်းတွေကို မေတ္တာထားပြီး ဆက်ဆံလေ သူတို့ စိတ်မမှန်လေ မနေနိုင်ဘဲ ထွက်ပြေးရလေဘဲ။ စိတ်ဓါတ်မှန်ပြီး စေတနာ ပါတဲ့ လူတွေ အနားမှာ ရှိလာလိမ့်မယ် ယုံကြည်တယ်။ လက်တွေ့ မဆန်ဘူး ဘဲ ပြောပြောပေါ့.. သူများ ရန်တိုက်မှ သူများ ဒေါသထွက်ပြီး နှလုံးသွေး ဆူပွက်မှ မြိန်မြိန်ကြီး စားရမဲ့ ထမင်း မသတည် စရာပါကွယ်။ ကိုယ်က စေတနာ ထားပြီး ကိုယ့်အပေါ် စေတနာ မထားနိုင်တဲ့ လူတွေ အနားမှာ ကြာကြာ မနေနိုင်ပါဘူး အဲဒါတော့ လက်တွေ့ပါဘဲ။ အေးချမ်းမှု ရှိနေရင် ဘာမဆို အဆင်မပြေဘူးလား။ အလုပ်ကို မိသားစု ဘ၀ လို သဘောထားပြီး တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မေတ္တာထားပြီး ဆက်ဆံ နေရင် ပြောမနာ ဆိုမနာပေါ့။ စိတ်ဝမ်းကွဲစရာလည်း မရှိဘူး။ ၀န်ထမ်းသည် သူဌေးအား အထောက်အပံ့ ဖြစ်သလို သူဌေးသည်လည်း ၀န်ထမ်၏ အကူအညီများစွာ နှင့် သက်သာ စွာ နေထိုင်ရသည်။
ဆူးပြောတာက လုပ်ငန်းသေးသေးတွေမှာ မှန်ပေမယ့် လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာတော့ သူဂျီးပြောတာကို ပိုလက်ခံပါတယ်။
လုပ်ငန်း ကြီးကြီး လုပ်ရင် အနားက လူကို ချော့ပေါင်း ဖြစ်ချင်တာ ပြောပြီး ကြည့်နေလိုက်.. စိတ်ချ အနားက လူက အရိုးကြေကြေ အရည်ခမ်းခမ်း အမြင်မတော် သူနိပ်ကွပ်သွားလိမ့်မယ်။
၀န်ထမ်းကို ၀န်ထမ်းအချင်းချင်း ဆက်ဆံတာ အထိရောက်ဆုံးဘဲလေ သိတယ်မဟုတ်လား။
မနောပြောသလို ကျွန်တော်ဆရာတစ်ယောက်ကလဲ ပြောဘူးတယ်ဗျာ။
ကိုယ်ဘယ်အဆင့် ဘယ်ရာထူးရောက်နေနေ (စိတ်ကောင်းလေးမွေးပါ။လောကမှာဘယ်နေရာကနေရ နေရ
တာဝန်ကျေရုံတင်မဟုတ်ဘူး စေတနာလေးပါထပ်ဆောင်းလို့ လုပ်ပါလို့ ) မှာဘူးပါသဗျာ။
စပြီး အလုပ်ဝင်ခါစကတော့ အဲဒီစကားလေးက နားထဲရောက်ပြီး သူပြောသလိုနေနိုင်သလိုပါဘဲ။
ဒါပေမယ့်လဲ လခပေးတဲ့ရက်လဲရောက်ရော သူဌေးပေးတဲ့ ပိုက်ဆံက အိမ်အသွားအပြန် ဘတ်စကားခလောက်တောင်မရှိတော့ အမှန်အတိုင်းပြောရင် ခင်ဗျားပြောသလို စိတ်ကောင်းမမွေးနိုင်ပြန်ပါဘူးဗျာ။
ကျွန်တော်က လူလောကကို မျက်စေ့လည်ပြီးမှားရောက်လာတဲ့သာမန်လူမို့လားတော့ မသိဘူးဗျ
ကိုယ်ပေးလိုက်ရတာနဲ့ ပြန်ရတာကို အမြဲနိုင်းနိုင်းကြည့်နေမိတယ်ဗျာ။
လောကကြီးက တော့ မမှားပါဘူး ကျွန်တော်လူဖြစ်လာတာကိုက မှားတာနေမှာပါ။
မနောတို့လို ကိုယ့်ကို ကိုယ် ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ကလေး ကျွန်တော်မှာနည်းနည်းလောက်ပါရင်သိပ်ကောင်းမှာဘဲလို့ တွေးမိတယ်ဗျာ။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ မနောရေးတဲ့စာလေးတွေက လူတွေကို အသိတရားအများကြီးရအောင်ပြောပေးနေတာကိုးဗျာ။
ကိုယ်က အဲဒီလို စိတ်သွင်းထားရင် နောက်ဘ၀ဆိုတာထက် ခုဘ၀မှာ ကျွမ်းကျင်မူ၊ နေရာရမူက အရင်လာမှာပါ။
In Chinese tradition, when you hostaguest with tea, tea cup should be two third filled, not full, for the rest third is for love, friendship and courtesy. It means that whatever you do, dress with loving kindness and cetana so that it will benefit you and others alike. In my experience, it pays whether you believe the life after death or not.
ကိုပေါက်ရေ လူဖြစ်တာ မမှားပါဘူး။ လူတိုင်း တစ်နေရာထဲမှာ ရပ်တည်နေကြတာမှမဟုတ်တာ ခုချိန်မှာ နိမ့်နေပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်မှာ မြင့်လာမှာပဲလေ… တစ်ချိန်ချိန်တော့ ကြိုးစားမှုရဲ့ရလဒ် အသီးအပွင့်ကိုတော့ ခံစားရမှာပါရှင်။